ချစ်သူ Archives - Focus Myanmar
ချစ်သူ အဖြစ် ရွေးဖို့ဆိုရင် လူချင်း တွေ့ဆုံပြီး (date ပြီး) မှ ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာ အမှန်ဆုံးပါပဲ။ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် သဘောကျနေပြီဆိုရင် လူချင်း အေးအေးဆေးဆေးတွေ့ကြည့်ပါ။ တကယ်လို့ သူ့ဘက်က ဒါတွေလုပ်လာပြီဆိုရင် သူကသင့်ကို တကယ်ချစ်ပြီး အတည်တွဲဖို့ဆိုတာ သေချာပါတယ်။
သင့် ချစ်သူ ရဲ့ နှလုံးသား တစ်ခုလုံးကို အပိုင်ရထားပြီဆိုတာ သိသာနေတဲ့အချက်(၆)ချက်
သင့် ချစ်သူ က သင့်ကိုတကယ်ချစ်တာလား၊ ဘယ်အတိုင်းအတာအထိချစ်လဲဆိုတာကို သိချင်စိတ်တော့ဖြစ်မိမှာပါ။ ဒီတော့ သင့်အပေါ်သူ့ရဲ့ပြုမူဆက်ဆံပုံလေးတွေကို ကြည့်ပြီး သူကတော့ ငါ့ကိုချစ်သားပဲ၊ သူကတော့ ငါ့ကိုမချစ်ပါလား…အဲ့ဒီလိုလေးတွေလည်း တွေးမိမှာပါပဲ။
သားသမီး ရတနာ ထွန်းကားစေမည့် နည်းလမ်းများ
ချစ်သူ စုံတွဲ အများစုအတွက်တော့ အိမ်ထောင်ပြုပြီးရင် သားသားမီးမီးလိုချင်တတ်ကြတာ ဓမ္မတာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဖေဖေမေမေ ဖြစ်ချင်သူတွေ သားသမီးရတနာ ထွန်းကားစေမယ့် နည်းလမ်း တွေကို ဒီဆောင်းပါးမှာ ဖော်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ချစ်သူ စုံတွဲတိုင်း အွန်လိုင်းပေါ်မှာမလုပ်သင့်တဲ့ အရေးကြီးဆုံးအရာက ဘာများလဲ?
ဒီတစ်ခါတော့ ချစ်သူ စုံတွဲတွေဖြစ်တတ်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေနဲ့ အကြံဥာဏ်ကောင်းလေး တစ်ချို့ ပြန်ပြီးမျှဝေပေးချင်ပါတယ်။တစ်ခါတစ်လေ ချစ်သူရည်းစားတွေ အွန်လိုင်း မှာရန်ဖြစ်တယ်၊ ဒါပေမဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင် တွေ့တဲ့အခါမှာတော့ အဲ့ဒီပြဿနာဟာ ဘာမှမဟုတ်သလိုဖြစ်သွားပြီး ပြန်တည့်သွားတတ်ကြတယ်ဟုတ်! ဒီလိုဖြစ်တတ်တာကိုလည်းချစ်သူစုံတွဲတိုင်းလိုလို သတိထားမိကြမှာပါ။
ချစ်သူနမ်းလို့ ကျန်ခဲ့တဲ့ အညိုအမည်းကွက်တွေ အမြန်ကွယ်ပျောက်ဖို့ နည်းလမ်း
ချစ်သူနဲ့ ချိန်းတွေ့ကြတဲ့အခါ အနည်းဆုံးတော့ အနည်းပွင့်လေးတွေ ခြွေကြမှာပါ။ ချစ်သူရဲ့ လည်တိုင်၊ ချစ်သူရဲ့ ပါးပြင်၊ ချစ်သူရဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေဟာ အနမ်းပန်းတွေ ခြွေစိုက်ရာ မဟာပထ၀ီမြေကြီးတွေပါဘဲ။
FB မှာချစ်သူဖြစ်တဲ့ အမျိုးသမီး(၅)ဦးကို အိမ်ခေါ်ကာ အဓမ္မကျင့်သတ်ပစ်ပြီး၊ ခြံထဲမှာမြှုပ်ခဲ့တဲံ သူ
တောင်အာဖရိကနိုင်ငံ၊ Hazyview အမည်ရ မြို့မှာ အမျိုးသားတစ်ယောက်ဟာ Facebook ကနေ ချစ်သူဖြစ်တဲ့ အမျိုးသမီး(၅)ဦးကို နေအိမ်မှာ ဖိတ်ခေါ်၊ အကြမ်းဖက် အဓမ္မပြုကျင့်ပြီး၊ ၎င်းရဲ့ နေအိမ်ခြံဝင်းထဲမှာပဲ လူမသိသူမသိ မြှုပ်နှံခဲ့ကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့က ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ချစ်သူ ကောင်လေး ကိုဘယ်တော့မှ မတောင်းဆိုသင့်တဲ့အရာတွေ
မိန်းကလေးအချင်းချင်းမို့ပြောတယ်မထင်ပါနဲ့။မိန်းကလေးအများစုက ရည်းစားရလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ အရုပ်တစ်ရုပ်ရလိုက်သလို (ယဉ်ကျေးစွာသုံးနှုန်းထားတာပါနော်) ကိုယ်ထားရာနေစေရာသွားဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားပမ်းစားကြိုးကိုင်တော့တာပါပဲ။ ဒီတော့ အစပိုင်းမှာသာအဆင်ပြေပေမယ့် နောက်ပိုင်းအချိုးပြောင်းတယ်ဘာညာဖြစ်ကြတော့တာပါပဲ။ ဒါကြောင့်ပျိုမေတို့အချစ်ရေးအဆင်ပြေစေဖို့ ချစ်သူကောင်လေးကိုဘယ်တော့မှမတောင်းဆိုသင့်တဲ့အရာတွေကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ချစ်သူ ကိုချစ်ကြောင်း ထုတ်ဖော်မပြတတ်တဲ့ မိန်းကလေး တွေမှာ ဒီအပြုအမူ (၅) ချက်ရှိ
ချစ်သူကို အရမ်း ချစ်နေပေမယ့် အချစ်ကို ထုတ်ဖော် မပြတတ်တဲ့ မိန်းကလေးတွေ ရှိပါတယ်။ အချစ်ကို မဖော်ပြတတ်တဲ့ မိန်းကလေး တစ်ယောက်ရဲ့ရင်ထဲမှာ ချစ်သူကို အရမ်းချစ်တယ် ဆိုတဲ့ ခံစားချက် ရှိပါတယ်။ ဒီလို အပြုအမူ ရှိတဲ့ မိန်းကလေးတွေက ချစ်ပေမယ့် မထုတ်ဖော်ပြတတ်တဲ့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ အပြုအမူတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အတူရှိတဲ့ အချိန်တွေများလွန်းရင် Relationship အတွက် ပြဿနာရှိလာနိုင်..
ချစ်သူ(သို့)အိမ်ထောင်သည်ဘဝမှာ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးမခွဲအတူရှိနေတာ ဟာ ပျော် စရာကောင်းတယ်ဆိုပေမယ့်လည်း အမြဲတမ်း အချိန်ပြည့်အတူရှိနေလွန်းပြန်ရင် လည်း မကောင်းပါဘူး။အိမ်ထောင်သည်ဘဝဆိုရင်တော့ မနက်မိုးလင်းတည်းက ဒီမျက်နှာ ၊မနက်စာစားလည်းအတူ၊ရေချိုးလည်းအတူ၊ထမင်းစားလည်းအတူ အဲ့ဒီ လိုအချိန်ပြည့်တစ်တွဲတွဲဖြစ်နေတာဟာလည်း အဲ့ဒီ Relationship အတွက် အန္တရာယ်ရှိလာနိုင်ပါတယ်။
သူကိုယ်တိုင်ဘွဲ့မရပေမယ့် ချစ်သူကို ကောလိပ်ပို့ပေးနိုင်ဖို့အတွက် အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာပြီး အလုပ်ကြိုးစားခဲ့တဲ့သူ
အချစ်စစ်အချစ်မှန်နဲ့ ချစ်သူတွေဟာ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ဖြည့်ဆည်းပေးတတ်ကြပြီး ချစ်သူအတွက်ဆို ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုတောင် စွန့်လွှတ်ဖို့ ဝန်မလေးတတ်ကြပါဘူး။ တကယ့်လက်တွေ့ဘဝမှာတော့ Ador Adrian ဆိုသူဖိလစ်ပိုင်အမျိုးသားတစ်ယောက်ဟာ ချစ်သူရဲ့ပညာရေးကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ဖို့အတွက် အနစ်နာခံမှုတွေ အလုပ်ကြိုးစားမှုတွေနဲ့ အချစ်စစ်အကြောင်းကို သက်သေပြခဲ့တဲ့အတွက် ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာ ဟိုးလေးတကျော်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။